रोल्पामा ‘आदर्श’ छविका ‘आदर्श’ आएपछि प्रचण्डलाई तनाव ! — Sanchar Kendra
रोल्पामा ‘आदर्श’ छविका ‘आदर्श’ आएपछि प्रचण्डलाई तनाव !
काठमाडौँ। रोल्पा जनयुद्धको आधार इलाका । आर्दश छविका चुडामणी वली आदर्श आधार इलाकाका पुराना कमाण्डर स्थानीय तह निर्वाचनमा सहभागी भएपछि नेकपा माओवादी केन्द्रलाई झट्का लाग्ने भएको छ। आदर्शले रोल्पाको गंगादेव गाउँपालिका अध्यक्षमा ‘स्वतन्त्र उम्मेदवारी’ घोषणा गरेका छन् ।
उनको उम्मेदवारी घोषणाले माओवादी केन्द्रका नेता तथा कार्यकर्तालाई पनि आक्रशित गरेको छ । आदर्शले उम्मेदवारी घोषणासँगै भोट माग्न सुरु गरिसकेका छन् । युवा र किसानसँगै टोलटोलमा भेटिने उनी आफूलाई भोट माग्छन् त्यसपछि स्कूल, अस्पताल, खानेपानी, बाटो–घाटो, पुल–पुलेसा, मठ–मन्दिरको चर्चा गर्छन् ।
उनी ‘चुनाव चिन्ह’ के हो ? उनलाई नै थाहा छैन तर उनी मतदाताको घरदैलोमा पुगेर आफूलाई भोट दिन भनिरहेका छन् । चुनाव चिन्ह मनोनयन दर्तापछि मात्रै पाउने छन् । वली गंगादेवका मतदातासँग राय मागिरहेका भेटिन्छन् । स्वतन्त्र उम्मेदवार उनी गाउँतिर एक्लै भने छैनन् ।
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका स्थानीय नेता–कार्यकर्तासँगै हिँडिरहेका छन् । यत्तिमात्रै होइन चुनावी प्रचारमा माओवादी केन्द्रका कतिपय जिम्मेवार नेता–कार्यकर्ता पनि उनीसँगै देखिएका छन् । माओवादीका नेता कार्यकर्ताले आफ्ना पुराना कमाण्डर अर्थात् कमरेड आदर्शलाई जिताउन लागि परेका छन ।
पार्टी उम्मेदवार छाडेर स्वतन्त्र उम्मेदवारको चुनावी प्रचारमा माओवादी कार्यकर्ता हिँडेका छन् । काठमाडौँ गएका नेताहरू गाउँ फर्किदैनन् । उहाँ त फर्किनुभयो नि ! गाउँपालिका अध्यक्ष लड्ने चर्चाले यहाँका जनता उत्साहित छन् । यस्तो बेला पार्टी–साथी भन्ने होइन ।
राम्रो उम्मेदवारलाई जिताउनुपर्छ । हाम्रो आस्था राख्ने पार्टी माओवादी केन्द्र नै हो । तर आदर्शलाई भोट हाल्छौं,’ माओवादी केन्द्रका एक जना कार्यकर्ता भन्छन् । वलीको उम्मेदवारी घोषणासँगै गंगादेवका मतदाता प्रष्ट वक्ता र कामकाजी नेतालाई आउँदो स्थानीय निर्वाचनमा रोज्न पाउने भन्दै खुशी भएका छन् ।
उनी प्रायः सबै टोलमा छिरिसकेका छन् । भेटघाटमा आफ्नो विचार राख्छन् । मतदाताको गुनासो पनि सुन्छन् । अघिल्लो निर्वाचनमा खराब पात्र जिताएर बर्बाद गरियो ! अब त राम्रो व्यक्तिलाई छान्ने हो । भ्रष्ट उम्मेदवारलाई भोट हाल्दा ठूलो दुःख पायौं,’ एक युवाले भने ।
गंगादेवबासीलाई आदर्श देखे–भेटेपछि राजनीतिक पार्टीको वास्ता छैन । यहाँ नेत्रविक्रम चन्द नेतृत्वको नेकपा निकै कमजोर छ । तर स्वतन्त्र उम्मेदवार भने बलिया छन् । सबैले रूचाउँछन् र मान्छन् । वलीको पनि यत्ति अपेक्षा छ– सबै मतदाताले मताधिकार प्रयोग गर्ने क्रममा आफूलाई नै जिताउने छन् ।
उनी निर्वाचनमा सहभागी हुने भएपछि जिल्लामा मात्र होइन केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड पनि तनावमा छन् । आफ्नो जित निश्चित भएको पालिकामा ओली आएपछि प्रचण्ड तनावमा छन् ।